Ukusimama - I-BXL Packaging Creative
Ukupakisha okusimeme Namuhla nakusasa
Ngokuya ngokuqondisisa kocwaningo lwe-IBM, ukusimama kufinyelele eqophelweni lokungena. Njengoba abathengi beqhubeka nokwamukela izimbangela zomphakathi, bafuna imikhiqizo nezimpawu ezihambisana nezindinganiso zabo. Cishe abathengi abayisithupha kwabayishumi okuxoxwe nabo bazimisele ukushintsha imikhuba yabo yokuthenga ukunciphisa umthelela kwezemvelo. Cishe abaphenduli abangu-8 kwabali-10 bakhombisa ukusimama kubalulekile kubo.
Kulabo abathi kubaluleke kakhulu / kubaluleke kakhulu, ngaphezulu kwama-70% bazokhokha imali ekhokhwayo engama-35%, ngokwesilinganiso, yemikhiqizo ezinzile futhi ebhekele imvelo.
Ukusimama kubalulekile kuwo wonke umhlaba. I-BXL Creative ithatha umthwalo wayo wokuhlinzeka amaklayenti aphesheya ngezixazululo zokupakisha ezinobungani futhi ifaka isandla kumbangela wokusimama komhlaba.
Lapho ubuciko buhlanganiswe nesisombululo sephakheji ye-eco. I-BXL Creative iwine indondo yeBest of Show emncintiswaneni weMobius ne-design kaHuanghelou.
Kulokhu kudalwa kwephakeji, i-BXL isebenzisa i-eco paper ne-paperboard ukwakha isakhiwo sebhokisi elinamandla, futhi iyayihlanganisa nomklamo wezithombe ukulingisa ukubukeka kwesakhiwo seHuanghelou. Umklamo wonke wephakheji wethula ukunakekelwa kwe-BXL Creative kanye nomthwalo wemfanelo kwezenhlalo, ngenkathi ngasikhathi sinye, uletha ubuhle bobuciko.
Ukupakisha uginindela obunjiwe, obizwa nangokuthi i-fiber ebunjiwe, kungasetshenziswa njengethreyi yefayibha noma iziqukathi zefayibha, okuyisixazululo se-eco yokupakisha, ngoba yenziwe ngezinto ezahlukahlukene ezinemicu, njengephepha elenziwe kabusha, amakhadibhodi noma eminye imicu yemvelo (njengomoba, uqalo , utshani bukakolweni), futhi ingabuye isetshenziswe kabusha ngemuva komjikelezo wayo wokuphila osebenzayo.
Ukubaluleka okukhulayo kokusimama komhlaba wonke kusizile ukwenza ukufakwa koginindela kube yisixazululo esikhangayo, ngoba kuyaboliseka kalula noma ngabe akunalutho lokulahla udoti noma okusetshenziswayo.
Ukuhlala Ngokuzwana Nemvelo
Lo mklamo wephakeji ubuye ususelwe kumqondo we-eco. Yenzelwe umkhiqizo welayisi we-eco owaziwa kakhulu wase-China i-Wuchang Rice.
Iphakethe lonke lisebenzisa iphepha le-eco ukusonga ama-cubes welayisi bese liphrinta ngezithombe zasendaweni zezilwane zasendle ukuletha umyalezo wokuthi lo mkhiqizo unakekela izimpilo zasendle nemvelo yemvelo. Isikhwama sephakheji sangaphandle sisekwe futhi ekukhathazekeni kwe-eco, okwenziwa ngokotini futhi kuyasetshenziswa njengesikhwama se-bento.
Esinye isibonelo esifanele ukukhombisa okulethwa yiphakheji, lapho ubuhlakani buhlanganiswe nesixazululo sephakeji le-eco.
I-BXL Idala lo mklamo wephakeji isebenzisa okubhalwe ephepheni le-eco kuphela, kusuka ebhokisini elingaphandle kuye kuthileyi langaphakathi. Ithileyi ligcwele izingqimba zebhodi likathayela, lihlinzeka ngokuvikelwa okugcwele kwebhodlela lewayini nganoma yini yokuhamba kanzima.
Futhi ibhokisi elingaphandle liphrintiwe nge- “The Disappearing Tibetan Antelope” ukuletha umyalezo emphakathini wokuthi izilwane zasendle ziyanyamalala. Sidinga ukuthatha izinyathelo manje futhi senze izinto ezinhle emvelweni.